Ebee ka ịchọta ezigbo backlinks maka ebe nrụọrụ weebụ gị SEO?
Ọ bụrụ na ị na - agụ isiokwu a, ị nwere ike ịmara na ịmepụta mgbasa ozi kachasị mma agaghị ezu iji mepụta ọdịnaya dị mma ma dozie njehie na saịtị ahụ, ị ​​ga - eme ka saịtị gị hụ maka engines ọchụchọ site na njikọ ụlọ ọrụ njikọ.Enwere ọtụtụ ihe dị iche iche dị iche iche nke a ga-ewere na akaụntụ mgbe ị na-ewu backlinks maka ebe nrụọrụ weebụ gị SEO. Mbụ, backlinks kwesịrị ịbịa na saịtị gị site na ngalaba kwadoro na otu mba ebe ịchọrọ ịkwado nke ọma - vps que es. Ọzọkwa, backlinks kwesịrị site na DA40-DA100 ibe weebụ ndị dị mkpa iji dị mkpa na gị ahịa niche na ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ibe weebụ na-ezo aka na mkpokọta dị mkpa maka isiokwu azụmahịa gị, a na-elebanye backlink sitere na ibe a site na engines ọchụchọ dị ka kwesịrị ekwesị ma bụrụ ndị a tụkwasịrị obi. A ga-etinyerị aka gị niile backlinks na aka ọdịnaya n'enweghị akwụkwọ edemede ọ bụla. Ị ga-ama na Google nwere ike ịchọta njikọ ndị na-akpaghị aka wee nweta ahụhụ dị oke njọ dị ka ntanetị ọhụrụ Google Panda. Ọ bụ ihe ezi uche dị na itinye backlinks na ebe nrụọrụ weebụ ndị ahịa Google na ndị ọrụ na-eleta ugboro ugboro. Ọ pụtara na ị ga-ekwenyere ndị isi na ntaneti gị ma ọ bụ otu n'ime ndị metụtara ya ka ha nwee ike nweta backlinks kacha mma maka saịtị gị SEO. Ọzọkwa, ị ghaghị ijide n'aka na ị gaghị ewulite njikọ na deeddexed ma ọ bụ machibidoro weebụsaịtị.
Ya mere, ugbu a mgbe i chebachara ihe niile a kpọtụrụ aha n'elu, ị nwere ike ịchọta ebe zuru oke na-eme ihe mgbaru ọsọ gị.Ihe niile ị chọrọ bụ ịmepụta atụmatụ zuru ezu dabere na njirisi nhọrọ ndị a. Enweghị m ike ịzụta ịzụta njikọ dabara naanị na weebụsaịtị Websaịtị. Nke a Google algorithm adịghị emelite ọzọ ma nwee ike igosi gị na ọ bụghị ezigbo nsonaazụ. Enwere ọtụtụ njikọ njikọ ihe ndị na-enye aka n'ichepụta search engine dị elu, ya mere, ịzụta njikọ ịdabere na ndị metric a agaghị emezu ihe mgbaru ọsọ gị.
Nzọụkwụ iji nweta akara azụ kachasị mma maka SEO
Họrọ isi ihe dị mkpa
Iji nweta ihe njikọ njikọta na weebụ gị. peeji nke, ịkwesịrị ịzụta njikọ sitere na ibe azụlink dị mkpa. Akwụkwọ ndị a nwere otu ihe ahụ ma ọ bụ isiokwu yiri ya dị ka ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ma nwee ohere magburu onwe ya iji ruo ahịa gị.
E nwere ụzọ dị iche iche a ga - esi nweta ụzọ nchọta azụ azụ ziri ezi maka ngalaba gị:
Chọọ isiokwu ma ọ bụ URL
Ọ na-enye nsonaazụ kachasị dịka ịchọrọ isiokwu n'ime ọdịnaya nke saịtị ndị bipụtara gị. Ọzọkwa, ị nwere ike ịchọ site na otu URL nke ngalaba ebe ịchọrọ ịtọ njikọ njikọ gị. Nchọgharị ndị a na-enye gị ohere ịchọta ibe weebụ ndị kachasị mkpa maka azụmahịa gị ma nweta njikọ sitere na isi mmalite ndị a.
Chọọ site na ngalaba aha
ohere ọzọ iji nweta akara azụ dị mma maka SEO bụ ịchọpụta ihe dị mkpa ibe weebụ site na mpaghara mpaghara dị iche. Ị nwere ike igosi ngalaba mpaghara ị na-achọ ma nweta ndepụta nke ụdị dị iche iche kachasị mma. Google mara ngalaba dị ka. edu,. com. ,. gov dị ka ha na-abụkarị àgwà, ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na inye ndị ọrụ ozi ọma. Ọ pụtara na backlinks si na ngalaba ndị a ga-ewetara gị ọtụtụ uru.
Ị nwere ike ịchọta ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị ekwesị site na ịhọrọ otu azụmahịa nke metụtara ọrụ gị. Ị nwere ike ịhọrọ ọtụtụ edemede ma ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị dị na niche dị iche. Jide n'aka na ị rute ebe nrụọrụ weebụ dị mkpa. Ma ọ bụghị ya, ọ bụghị iji wuo njikọ ụlọ njikọ nwere ike belata ebe obibi gị ma bibiri mgbalị SEO gị.